रुख काट्दा रगत निस्किने जे माग्यो तेहि पूरा हुने अचम्म परम्परा भएको मन्दिर….! – Gorkhali Dainik
रुख काट्दा रगत निस्किने जे माग्यो तेहि पूरा हुने अचम्म परम्परा भएको मन्दिर….!
October 4, 2020 235
ढोला मण्डलीमाईका छीमेकी ७७ बर्षिय बुबाको भनाइअनुसार ढोलाकी मण्डलीमाईको उत्पत्ति भएको समय लगभग १८५० आडकलन गरेका छन् । त्यतिबेला एकजना मगरजातिका मानिस घर बनाउनका लागि सालको थाम का;ट्ने उद्देश्यले बन्चरो लिएर वनमा गए ।
पछि उनले मण्डलीमाईलाई प्रार्थना गरेर मैले मण्डलीमाईको बारेमा केही बिराएको भए मलाई क्षमा गर्नुहोस् ।हजुरलाई पाठी चढाउनेछु भनी भाकल गरेपछि उनका आँखा खुले र उनी घरमा गई झाँक्रीलाई आफ्नो ढोलामण्डलीमा भएको घटनाबारे सुनाउँदा तपाईंले मण्डली भगवतीलाई मङ्गलबार एउटा पाठी लगेर चढाउनुहोस् भनी निर्देशन गरेपछि उनले मण्डलीमाईलाई पाठी चढाएपछि उनका आँखा राम्रोसँग खुले भन्ने कुरा पुजारी दर्लामी मगरले बताए ।
”,त्यसपछि मण्डलीमाईको शक्ति र सत्यता रहेछ भनी विश्वस्त भई पाठी, घन्ट र बाघको मूर्तिसमेत चढाएका थिए । त्यहाँको चलनअनुसार महिला जातिले त्यहाँ जान पनि नहुने र पूजा पनि गर्न नहुने भन्ने किसिमको प्रचलन छ ।]
Prevकुकुर छोड्न नमानेपछि विवाह रोकियो……….!
Nextभाईलाई बा’घले घि’सारेर लगेर खा’यो, हामीहरु ज्या’न बचाएर रुखमा बसेर हेरी रह्यौँ,….
काठमाडौंमा मास्क नलगाउनेलाई अब कारबाही (विज्ञप्ति)